श्रीलङ्कामा पुन शक्तिशाली बम बिस्फोट ! - PUBLICAAWAJ
श्रीलङ्कामा पुन शक्तिशाली बम बिस्फोट !
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख १२, २०७६१४:१३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
एजेन्सी, श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोबाट पूर्वतर्फको बाहिरि इलाकामा बिहीबार पुनः बम बिस्फोट भएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ । साथै प्रहरीले स्थानीय समयानुसार बिहीबार भएको यस बम आक्रमणबाट कुनै मानवीय हताहतको खबर प्राप्त नभएको पनि बताएका छन् ।
गत आईतबार मात्रै तिन पाँच तारे होटल र तिन गिर्जाघरमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा बम बिस्फोट हुँदा बिहीबार मध्यान्हसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ३६० पुगेको छ ।
श्रीलङ्काको विदेश मन्त्रालयले मृत्यु हुनेमा अमेरिकी, बेलायति, भारतीय, जापानीसमेतका ३७ जना विदेशी नागरिक रहेका जनाएको छ । साथै बिस्फोटमा परि घाइते हुनेमा करिब ५०० व्यक्ति रहेका छन् ।
घाइतेहरुको उपचार भैरहेको हुँदा केही व्यक्तिको अवस्था अझै निकै गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । बम बिस्फोट भएका स्थानहरुमा चर्च मध्य राजधानी कोलम्बोको सेन्ट एन्थोनी चर्च, नेगोम्बोस्थित सेन्ट सेबास्टियन चर्च र बाट्टिकोलोवास्थित चर्च रहेको छ भने पाँच तारे होटल मध्य साङ्ग्रिला, सिनमन ग्रान्ड र किङ्सबरी रहेका छन् ।
बिस्फोटको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट समूहले लिएको छ भने सरकारले श्रीलङ्कामै सामान्य सक्रिय समूह नेसनल थोहित जमाथको संलग्नताको आशङ्का गरेको छ । साथै श्रीलङ्का सरकारले उक्त समूहलाई अन्तराष्ट्रिय आतङ्कवादी समूहले मद्दत गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाएको छ ।
राजीनामा माग राख्दै हङकङमा प्रदर्शन !
इराकमा नेपालीद्वारा नेपालीको हत्या , शव पठाउन लाग्ने खर्च छैन !